कांग्रेस संस्थापनमा गुटको बिगबिगी, पौडेललाई ठण्डाराम पार्ने प्रयत्न « मेचीखबर
कांग्रेस संस्थापनमा गुटको बिगबिगी, पौडेललाई ठण्डाराम पार्ने प्रयत्न
५ फाल्गुन २०७२, बुधबार ०९:५२ मेचीखबर
काठमाण्डौ । विधानतः र व्यवहारिक रुपमा प्रमुख नेताको अवसानपछि दोस्रो नेता स्वतः प्रमुख नेता हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । तर, कांग्रेसमा सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि स्वतः प्रमुख नेतामा दरिनुपर्ने रामचन्द्र पौडेललाई लिएर यतिखेर चर्को मतभेद छ ।
मर्यादा क्रममा नेता शेरबहादुर देउवा दोस्रो तहमा हुन् तर, उनी गत महाधविशेनमा सभापतिमा पराजित भएपछि दोस्रो तहमा राखिएका थिए । यस्तो अवस्थामा विधानतः उपसभापति रामचन्द्र पौडेल स्वतः कार्यवाहक सभापति भए । तर, महाधिवेशन आउँन जम्मा १५ दिन मात्र बाँकी हुँदा कांग्रेस संस्थापनमा पौडेललाई नेता मान्न होइन नमान्न संस्थापनका गुटको बिगबिगी चलेको छ ।
यस अघिदेखि कोइराला परिवारलाई सहयोग गर्दै आएका पौडेल स्वतः सभापतिका दाबेदार हुनुपर्ने हो तर, कांग्रेसमा यस्तो भइरहेको छैन । तमाम सांगठनिक कमजोरी, सीप, क्षमता र योग्यताको अभावमा पनि कम बोलेरै निरन्तरताको राजनीतिले अरुमा असन्तुष्टीका बावजुद पनि संस्थापनलाई छिन्नभिन्न हुन दिएका थिएनन् । तर, जब उनै कोइरालाले २६ माघमा विश्राम लिए तब संस्थापनको नेता बन्न कांग्रेसमा तँछाडमछाँड देखिएको छ ।
१. कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल
कार्यवाहक सभापति पौडेलले कहिल्यै गुटको राजनीतिमा विश्वास गरेनन् । पार्टीमा संस्थागत जस्तो अघि बढेको गुटको विकासलाई निरन्तरता र जोड दिएनन् । तर, उनी यसपटक संस्थापनमा रहेर त्याग, तपस्या र योगदान गरेको आधारमा स्वतः संस्थापनको नेता बन्न पाउनुपर्ने र १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने पक्षमा छन् । कोइराला नबित्दैदेखि उनले सभापतिमा आकांक्षा राखेर सांगठनिक तयारीलाई तीव्रता दिएका थिए । उनी देश दौडाहामा मात्र निस्किएनन् । महाधिवेशनका लागि भन्दै देशभित्र र बाहिरसमेत चुनावी शैलीमा चन्दा उठाउदै आए ।
सुशील बितेपछि त त झन् नेता बन्न उनले दौडधूपलाई तीव्रता दिएका छन् । संस्थापनका नेता मनाउन उनको कोसिस जारी छ ।
२. प्रकाशमान सिंह
राजनीतिक सीप, क्षमता, कौशलता र योग्यता भन्दा सिंहसँग अर्को फाइदाको र सकारात्मक पाटो केही छ भने त्यो हो बाबु गणेशमान सिंहको विरासत । बाबुको विरासतलाई बिर्सने हो भने सिंहसँग अरु केही छैन भन्छन् उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु । काठमाडौंका रैथाने यी सिंहको काठमाडौंको संगठनमा पकड देखिन्छ । तर, देशव्यापी पकड भने छैन । तर, पनि उनी १२ औं महाविधेशनमा संस्थापनबाट निर्वा्चित महामन्त्री बनेको भन्दै यसपटक सभापतिमा दाबेदारी गरिरहेका छन् । कोइरालाको निधनपछि उनलाई दाबेदारी गर्न झन् सजिलो भएको छ । उनी यतिखेर देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई फकाउने गरी गतिविधिमा लागेका छन् ।
३. महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला
सिटौला गिरिजा हुँदा उनका सबैभन्दा बढी विश्वासपात्र थिए । शान्ति प्रक्रियामा गिरिजासँग घनिष्ठ हुने मौका सिटौलाले पाए । उनको निधनपछि उसैगरी सिटौलाले सुशीलसँग सम्बन्ध जोडे । तर, सुशीलका प्रधानमन्त्रीसहितका उत्तरार्धका वर्षमा उनको सुशीलसँगको सम्बन्ध सौहाद्र्र रहेन । त्यसैले सभापति हुँदै सिटौलाले सभापतिकै उम्मेदवार बन्न देशव्यापी तयारी गरे । दौडाहमा निस्के । सुशील बितेपछि त झन् महाधिवशेन प्रतिनिधिसँग जोडिन उनी फोन र भेटघाटमार्फत सक्रिय हुँदै आएका छन् । केही दिन संस्थापनको छलफलमा सिटौलाले मुखै फोरेर कार्यवाहक सभापति पौडेललाई ‘तपाईंले तीन सय भोट कटाउनुहुन्न, त्यसैले प्रतिनिधिको मूल्यांकन गरेपछि मात्र उम्मेदावरी घोषणा गरेर जानुपर्छ’ भनेका थिए । सिंहको तुलनामा संगठनका पकड भने यिनको छ । संगठनमा खेल्न सक्छन् ।
४. सुजाता कोइराला
सुजातासँग पनि राजनीतिक कौशलताभन्दा बाबु गिरिजाप्रसादको विरासतभन्दा केही छैन भन्छन् जान्नेबुझ्नेहरु । तर, उनी पनि यसपटक सभापतिका आंकांक्षी मध्येकी एक हुन् । सुशीलदा नउठे मैं हुँ संस्थापनको उम्मेदवार भन्ने सुजातालाई कोइराला बितेपछि सजिलो भएको छ, दाबी गर्न । तर, उनको यो दाबीलाई उपसभापतिसम्म हात पार्ने रुपमा पनि कांग्रेसमा व्याख्या गरिन्छ । उनी पौडेललाई हुँदै हुँदैन भने र लागेकी छैनन् । तर, आफूलाई पदाधिकारीमा सुरक्षित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सशांक र शेखरसँग पनि उनको उतिराम्रो सम्बन्ध छैन । आफूलाई दुवैले मान्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छिन् ।
५. डा. रामशरण महत
डा. महत पनि सभापतिका लागि आफूमा कूशलता भएको दाबी गर्दै आएका छन् । सुशील बितेपछि उनलाई दाबी गर्न थप बल पुगेको छ । तर, उनलाई सभापति दिन संस्थापनका नेता तयार हुने अवस्था छैन । यस अघि पदाधिकारी नभएका उनी आफैलाईंचाँहि म बरिष्ठ हुँ भन्ने लाग्ने गर्छ ।
६. युवाहरु अर्को फ्याक्टर
गगन थापा, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिरे पनि कांग्रेसका महत्वपूर्ण फ्याक्टर हुन् । युवाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने नारासहित यी महाधिवेशनमा होमिए पनि निर्णायक पनि हुन सक्छन् । थापा, पौडेल र घिमिरले कांग्रेसलाई जोगाउन सिद्धान्तनिष्ठ भएर समयसान्दर्भिक बनाउन उनीहरुले दबाब दिइसकेका छन् । यी मध्ये थापाले कांग्रेस जोगाउन र भागबण्डा अन्त्य गर्न आफू महामन्त्रीमा उठ्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । यो यूवा समूह पनि पौडेललाई नेता मानिहाल्न तयार छैन ।